Soomaaliya oo kamid ah dalalka sida aadka ah looga arki doono Dayax madoowbaadka – SBC
Soomaaliya oo kamid ah dalalka sida aadka ah looga arki doono Dayax madoowbaadka
Boosaaso:- Waxaa Maanta dunidu ay indhaha ku haysaa xagga iyo samada iyadoo la sugayo dayax madowbaad ay horey u sheegeen Science- yahanada caalamka ee ku taqasusay cilimga falakiga ama xiddigiska.
Axmed Muxsan Al-juubi oo ah khabiir xagga cilmiga xiddigaha oo u dhashay dalka Yemen ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee SABA in maanta oo arbaca ah oo ku beegan 15 bisha June in dalal badan laga arki doono dayax madowbaad dalalkaas oo ay 22 kamid ah yihiin dalalka carabta.
Sidoo kale madaxa guddiga u qaabilsan dalka isutaga Imaaraatka carabta la socoshada bilshada bilaha haweenayda lagu magacaabo Basmatu Diyaab ayaa sheegtay in dayax madoowbaadka gebi ahaan laga arki doono bartamaha qaaradda Asia iyo galbeedkeeda iyo bariga Yurub iyo inta badan qaaradda Africa.
Dalal kale oo badan ayaa qeyb ahaan laga arki doonaa dayax madoowbaadka marka laga reebo dalalka Ameerikada woqooyi.
Dayax madowbaadkan ayaa socon doono 5 saacadood balse gabi ahaan ayuu madow u ahaan doonaa Dayaxu muddo dhan 100 daqiiqo iyo 12 ilbiriqsi kaasi oo gaari doono heerka madowgiisa %170.
Dhanka kale Bayaan ay soo saartay Jaamacadda mareykanka ee magaalada Qaahira ayaa lagu sheegay in jaamacadu Albaabadeeda u furayso dhamaan dadka doonaya in ay ku daawadaan dayax madoowbaadkan qalabka loo yaqaan Telescope-ka iyadoo sidoo kalana la daawan doono Video lagu soo bandhigi doono casharo ku aadan faa’iidada qoraxda iyo dayaxu ay u leeyihiin nolosha bani’aadamka.
Seenisyahannada ayaa ku tilmaama in Dayax madoobaadka uu ku yimaado marka Dhulku kala dhexgalo Qoraxda iyo dayaxa, kaas oo harka dhulku saamayn ku yeesho dayaxa sidaasna uu kuyimaado dayaxmadoobaad qayb ah ama wada saameeya gebi ahaanba
Marka qoraxdu madoobaato ayey sheegaaan in sabab u tahay marka Dayaxu kala dhex galo Qoraxda iyo Dhulka ,taasoo badanaa aan wada saamayn dhulka maadaama Dhulku kaweyn yahay Dayaxa .
Diinteena Islaamka ayaa inoo shegatay in qorax madowbaadka iyo Dayax Madowbaadku ay yihiin labo aayat oo kamid ah ayaataka ALLE kuwaas oo la doonayo in bani’aaadamka ay ku cibra qaataan ayna ALLE uga towbad keenaan dambiyada ay ku jiraan ama ay galeen.